DAAWO:-Somaliland oo qiratay in DF ka xoogtay maamulka hawada Soomaaliya | Wardoon
Home Somali News DAAWO:-Somaliland oo qiratay in DF ka xoogtay maamulka hawada Soomaaliya
DAAWO:-Somaliland oo qiratay in DF ka xoogtay maamulka hawada Soomaaliya
Masuuliyiin xilal kasoo qabtay Somaliland xiligii Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa xaqiijiyay in dowladda Soomaaliya ay ka xoogtay maamulka Hawada qeybtii Somaliland ay ku laheyd.
Wasiirkii hore ee duulista hawada Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi oo saxaafadda la hadlayay ayaa sheegay in xiligii talada hayeen ay dadaal badan u geleen sidii ay u heli lahaayeen doorka ay ku lahaayeen maamulka Hawada Soomaaliya.
Maxamuud Xaashi, ayaa sheegay in markii hore Qaramada Midoobay ay maamuli jirtay saadaasha hawada Soomaaliya, balse hay’adaha Qaramada Midoobay ay ka hiiliyeen Somaliland, taasi oo keentay in laga xoogo maamulka Hawada Soomaaliya, sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale wuxuu sheegay dowladda Soomaaliya inay kaga baxday Somaliland heshiisyo badan oo dhanka maamulka Hawada ah oo la wada galay, iyadoo taasi ay dhalisay in Muqdisho loosoo wareejiyo.
Heshiisyadii Istanbuul ee ay Somaliland la gashay Dowladda Federaalka ah ayaa dhigayay in Maamulka Hawada laga dhigo mid farsamo oo laga daayo siyaasadda, xaruntiisana noqoto Magaalada Hargeysa,waxaana ballantii ka baxday dowladda Federaalka ah sida uu yiri Wasiirku.
Maamulka Hawada Soomaaliya ayaa Muqdisho loosoo wareejiyay, iyadoo laga soo raray magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo tan iyo burburkii laga hagayay diyaaradaha.
Previous articleXarunta Tv-ga Universal ee Muqdisho oo laweeraray
Next articleDAAWO:- Mahad Cawad: Soomaali waxaa ka dhaxeeya calanka iyo Xamar inta kale waa la kala leeyahay
Wiil iyo gabadh walaalo ah oo xalay Muqdisho lagudilay
DAAWO:-“Qoor-Qoor Baarlamaankiisa ayuu ka arkidoonaa waxa uu ku sameeyay kursiga #Hop...